दिदी थिएँ, अब आमा भएँ-मिथिला शर्मा – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
दिदी थिएँ, अब आमा भएँ-मिथिला शर्मा
By डिजिटल खबर Last updated Dec 19, 201990
प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘आमा’मा पनि उनी आमाकै भूमिकामा छिन्। यसअघि फिल्म ‘कथा काठमाडौं’मा पनि उनी आमाकै भूमिकामा देखिएकी थिइन् । चलचित्र ‘दिदी’मा दिदी पात्रमा रहेकी मिथिला शर्माले अब आफू दिदी नभएर ‘आमा’ भइसकेको बताएकी छन् । चलचित्र ‘दिदी’मा २०५० सालमा प्रदर्शनमा आएको थियो ।
तर, दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित ‘आमा’ले भने उनको परिचयमा ‘आमा’उपनाम थपिदिएको उनी बताउँछिन्। फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ‘आमा’लाई जीवनको टर्निङ पोइन्ट नै घोषित गरिन् ।
‘मान्छेको जीवनमा एउटा टर्निङ पोइन्ट हुन्छ। घुम्ती आउँछ। यो फिल्म मेरो जीवनको एउटा घुम्ती नै हो, दिदीबाट आमामा जाने’, उनले भनिन् ‘हुन त मैले थुप्रै फिल्ममा आमा बनेर खेलिसकेको छु। फिल्ममा आमा बने पनि मलाई सम्बोधन गर्ने आमा नै थियो। तर, दिदीपछि मेरो उपनाम परिवर्तन गराएको छ आमाले।
चलचित्रको ट्रेलर बिहीबार मात्र सार्वजनिक गरिएको छ। पूर्ण चलचित्रले दर्शकमाझ कस्तो उपस्थिति जनाउने हो र, चलचित्र आमा र आमा पात्र कति सफल हुने हो त्यो भने आउँदो फागनु ९ पछि थाहा हुनेछ।
फिल्ममा काम गरेसँगै सबैले उनलाई आमा सम्बोधन गर्न थालेको अनुभव उनले कार्यक्रममा सुनाइन्। यो फिल्ममा उनी १० दिनपछि मात्रै आवद्ध भएकी थिइन्। यसअघि आमाको भुमिकामा कलाकार सुर्यमाया खनाल फिल्ममा अनुबन्धित भएकी थिइन्। फिल्म निर्माणअघि नै उनी फिल्मबाट बाहिरिएपछि मिथिलाको इन्ट्री भएको थियो ।
चलचित्रमा मिथिलासँगै सुरक्षा पन्त, लक्ष्मी भुसाल, सरिता गिरी, देशभक्त खनाल, टीका पहारी, आशान्त शर्मा, मनीष निरौला, पदमप्रसाद पौडेललगायतको अभिनय छ। प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्मबाट मिथिलालाई के आमाकै उपनाम मिल्ला त? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
AAMADigital KhabarEntertainmentFilmMithila SharmaNepal
सिमा सुरक्षामा ११४ सुरक्षा थप गरियो मन्त्री बास्कोटा
आज – ०४ पौष २०७६ शुक्रवार को राशिफल